Qorshe Mareykanka la damacsan yahay Al-Shabaabka Kenya oo la shaaciyay - Awdinle Online
Qorshe Mareykanka la damacsan yahay Al-Shabaabka Kenya oo la shaaciyay
Mareykanka ayaa waxaa la sheegay in uu wado qorsho cusub oo ka dhan ah Al-Shabaabka weerarada ka geysta Gudaha dalka Kenya,qorshahaas oo ah in uu dalka Kenya ka fuliyo duqeymo dhinaca cirka ah.
Afhayeeno u hadlay AFRICOM iyo Wasaarada Gaashaandhiga Mareykanka oo xaqiijiyey qorshahaan ayaa ka gaabsaday in ay fahfaahin, sida lagu daabacay Wargeyska afka dheer ee New York Times oo saraakiil Ameerikaan ah kasoo xigtay in duqeymaha ay si gaar ah uga dhacayaan
Sidoo kale wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in duqeymaah uu mareykanka ka fulinayao gudaha Kenya ay wada ansixiyeen Waaxda Difaaca iyo madaxweyne Donlad Trump si howshaasi loo bilaabo.
Degaannada ay macqulka tahay in duqeymaha laga fuliyo oo lagu tuhmayo Al-Shabaab ayaa waxaa kamid ah ismaamulada Lamu iyo Garissa, Sidda laga soo xigtay warbixinta, taliska Mareykanka ee qaarada Afrika oo fulinaya weeraradan dhanka hawada ah.
“Mareykanka wuxuu mar walba doonayaan in uu ilaaliyo badqabka muwaadiniintiisa iyo ciidamadiisa ka jooga Kenya,” ayuu yiri afhayeen u hadlay AFRICOM,waxaana u hadalkiisa intaasi ku daray “wax walba waanu u qaadeynaa arrintaas”.
Safaarada Mareykanka ee Nairobi iyo dowladda Kenya ayaanan ka jawaabin codsiyo loo diray kuna saabsanaa in ay tafaasiil ka bixiyaan qorshahaan oo sababi karta in dad Shacab ah oo ana waxba galabsan ay wax soo gaaraan.
Mareykanka ayaa duqeymo joogta ah waxaa uu ka fuliyaa degaano iyo degmooyin ka tirsan Koonfurta iyo Bartmaha Soomaaliya, kuwaas oo uu la beegsado Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab, hayeeshee mararka qaar ay waxyeelo kasoo gaarto dad Shacab ah.
Previous articleHowlgal culus oo lagu qabtay Askari dil geystay
Next articleBooliska Soomaaliya oo qabtay Mid kamid ah Rag loo heysto kufsiga & dilkii Xamdi